Thwebula Wise Care 365 5.6.3.559 Standard... – Vessoft
WindowsUhleloUkuhlanza nokuthuthukisa,Ukuhlola nokuxilongwaWise Care 365
Izigaba: Ukuhlanza nokuthuthukisa, Ukuhlola nokuxilongwa
Ikhasi elisemthethweni: Wise Care 365
Wise Care 365 – isofthiwe ukuthuthukisa nokwandisa ukusebenza uhlelo. Isofthiwe ikuvumela ukuba uhlole i-computer ngishiyeka futhi kuthola izinto eziyingozi ezisongela ukulondeka system. Care Wise 365 iqukethe module eyakhelwe-in eklanyelwe alungise amaphutha bese uhlanza ebhukwini uhlelo aphume amafayela engasebenzanga, cache, Windows izingxenye, izicelo yisikhathi, njll Wise Care 365 kungaba ukusebenza computer defragmenting disk kanzima futhi ebhukwini noma ukhupha izinhlelo engenamsebenzi okuyinto uziqede imithombo uhlelo. Care Wise 365 inikeza ubumfihlo idatha yomsebenzisi siqu, eyenqabela ukususwa amafayela kanye ukufinyelela idatha ku-besithathu.
Ihlola i-computer ukuze ngishiyeka
Ukulungisa amaphutha in ebhukwini uhlelo
Defragmentation a disk kanzima
Lokubuyisela amafayela asusiwe
Ukuvikelwa kwedatha Oyisifuba
Thwebula Wise Care 365
Amazwana ku Wise Care 365
Wise Care 365 software ehlobene
Lena isofthiwe ehlukahlukene yokuphathwa okuthuthukisiwe kwezinqubo nezinsizakalo kanye nokuqapha inethiwekhi nomsebenzi wedisk.
Lena imenyu yokuqala ye-Start ngesitayela se-Windows XP, esingasondelwa kubha yomsebenzi. Isofthiwe yenza ukufinyelela okusheshayo kuzici ezihlukahlukene zesistimu.
Ithuluzi ukuthola ulwazi mayelana uhlelo lokusebenza. Isofthiwe ubonisa izici hardware efakwe.